Chinja mazano, kujekesa pfungwa, kuwedzera hutano uye kutsvaga kukura
ne admin pane 20-12-24
Musi waGunyana 16-17, Yantai Shougang Dongxing Group Co, Ltd. yakaita musangano wevadiki wekuti "ishandise mweya weShougang's" matatu matsva "musangano". Vatungamiriri veboka makumi matanhatu nenomwe, vatungamiriri vakuru uye makadhi epakati-epakati kubva kumakambani ekudyara mhiri kwemakungwa ...
Kushandiswa kwesimbi ye tungsten
Simbi yeTungsten ndeye cemented carbide, inozivikanwa se tungsten titanium alloy. Hukukutu hunogona kusvika 89 ~ 95hra. Nekuda kweizvi, tungsten simbi zvigadzirwa (zvakajairika tungsten simbi wachi) hazvisi nyore kupfeka, zvakaoma uye kwete kutya kubvongodzwa, asi brittle. Cemented carbide inonyanya kunyorerwa ...
Chinja iyo pfungwa kujekesa kufunga kunosimbisa simba rekutsvaga budiriro
Nyamavhuvhu 16-17, Yantai Shougang Dongxing Group Co, Ltd. yakabata "kuita Shougang 'sanchuang' mweya wemusangano" musangano wemakurukota. Vanhu 67 vakapinda musangano uyu, kusanganisira vatungamiriri veboka, vakuru vakuru vakatumwa neboka iri mhiri kwemakungwa i ...
Iyo kambani yakabata "kudzikisira mutengo uye kugona" musangano wekusimudzira
Mangwanani emusi waGumiguru 20, kambani iyi yakaita musangano wekusimudzira munzvimbo yekuitira yevashandi kuti vaite "kudzikisa mutengo uye kugona" chiitiko. Makadhi mazana maviri nemakumi maviri nevashandi kubva kumatanho gumi nematanhatu ekambani vakapinda mumusangano, uye "kudzikisira mutengo uye ku ...
18 zvinhu izvo mushandi akanaka anofanira kuve nazvo
1. Ita mabhakuki emagwaro akakosha uye mafaera Mune rake basa, imwe inoita senge diki tsika ichaita kuti vamwe vanhu vave vakanaka kune vamwe, kutaura zvazviri, semushandi akanaka kwete chete anouya kubva kune yakanakisa pachayo, zvakare haisi muiyo yakakwira uye yakadzika IQ, eq, zvimwe hazvisi pahunyanzvi hwavo, uye zvakanyanya kukosha f ...
Tungsten Carbide Roller, Tungsten Carbide Roller Mhete, Machine Chikamu, Yakasimbiswa Carbide Roll, Mill Kutenderera Rings, Tungsten Carbide Kutenderera,